Dlala njengo-'Evil Dead's 'Ash Williams e' Skyrim '- iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Dlala njengo-'Evil Dead's 'Ash Williams e' Skyrim '
Dlala njengo-'Evil Dead's 'Ash Williams e' Skyrim '
by UTrey Hilburn III July 20, 2021 891 ukubukwa
Impela sonke sidlalile Skyrim ngayo yonke ifomethi eyodwa nengxenyekazi eyaziwa isintu manje. UTodd Howard noBethesda benze isiqiniseko sokuthi iSkyrim izogcina isebenza kuzo zonke izinto kufaka phakathi I-Pong uma unikezwa isikhathi esanele. Angikhonondi ukuthi ngumdlalo omuhle kakhulu lowo. Futhi, ama-mods amnandi. Imodi epholile kakhulu ekhonjiswe yi-PC Gamer, yiyo ekubona uthatha indima ye- Okubi Okushonile U-Ash Williams ngokulandela kwakho… futhi mhlawumbe nenkulungwane Skyrim dlala ngokusebenzisa.
I-mod ikubona uthatha indima ye-Ash ephelele nge-chainsaw nezwi. Uqinisile, ufika egcwele wonke ama-liners akhe amahle, lokho kuzokuqinisekisa ukuthi uyakucela Skyrim ukukunikeza ushukela ngasekupheleni kobusuku.
Ukuze udlale njengo-Ash kuzofanele ukuthi ufake i Ukufa Okubi mod bese usuka lapho. Kukufanele ngokuphelele okunye ukufakwa kwe- Skyrim nesikhathi esingakuthatha ukuthi usebenzise i-mod.
Ngakho-ke uthini wena, Screwhead? Ngabe uzothatha i- Skyrim shona njengomsindisi wethu othandekayo u-Ash Williams? Sazise esigabeni sokuphawula.
Umqondisi we-Fear Street unezinhlelo ezinkulu zokukhulisa indawo yonke. Funda kabanzi lapha.